Guqula uPhendlo lwe-Wordpress ngokuKhangela kuGoogle oSiko | Martech Zone
NgoMvulo, Septemba 15, 2008 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Masijongane nayo, WordPress Ukukhangela kuhamba kancinci kwaye kuyinyani. Ngombulelo, uGoogle uvutha ngokukhawuleza kwaye uchanekile. Ukongeza, iGoogle's Usesho lweMeko yeGoogle iguqukile ukuba ibethelelwe kwibhlog yakho (okanye iwebhusayithi).
Ii-Permalinks kunye noPhando oluCwangcisiweyo lukaGoogle
Kwindawo ene-permalinks efana neyam, kuye kwafuneka ndenze uguquko olunye, nangona kunjalo. Kwafuneka ndenze isenzo kwithegi yefom enxulumene nokubonelela nge-URL yonke ngethambeka.
Uphendlo lwesiqhelo kuGoogle lunenye into emnandi… iya kutsala umfanekiso obonisa ukuba indawo yakho iyayisebenzisa kwaye wenze ii-header ezilungiselelwe usebenzisa i-microdata ngokungqinelana schema.org. Ndisebenzisa i Iplagi yeOOPress WordPress SEO ukuyikhathalela loo nto- kwaye indawo yam iyahlaziywa ngemifanekiso ebonakalayo kwisithuba ngasinye.
Yenza iTemplate yeSiphumo sokuKhangela
Iziphumo zokuKhangela: [Faka ikhowudi yeZiphumo zoKhangelo kuGoogle apha]
Ngoku, xa usongeza iphepha elitsha leziphumo zakho, khetha oku njengetemplate:
Andiyi kuthandabuza ukwenza oku nakweyiphi na ibhlog- ingeyiyo nje yokuphuculwa komlilo kwisantya kodwa nakwiziphumo ezifanelekileyo. Unokwenza iibini ezimbalwa kwicala ngokunjalo! Zijonge kwaye unike uhlobo lwam olutsha lokuKhangela ukuze ujikeleze! Awuyi kudana!
tags: UGoogle cseUGoogle cse igama lendawoGoogle +isihlokoamashumi amabini elinanyewamashumi amabini aneshumiI-wordpress cseIgama elithi google cse
Ividiyo: Wayeza kwenza ntoni uSeth?
Sep 16, 2008 kwi-12: 59 AM
BendinoPhendlo lweSiko lukaGoogle kwibhlog yam ixesha elide ngoku. Nangona kunjalo, ndigcina zombini iinketho zivulekile.